Mpanamboatra vokatra - Factory Products China, mpamatsy
Noho ny vakana fitaratra tafiditra ao anaty ny marika, ny vakana fitaratra dia taratra amin'ny jiron'ny fiara amin'ny mpamily, manao toy ny fitaratra, izay miteraka vokarin'ny "hazavana" amin'ny tady. Ity dia fanampin-kevitra azo antoka ho fiarovana ny làlana.
Ny vakana fitaratra dia ampahany lehibe amin'ny rafitra fiarovana ny fifamoivoizana. Raha tokony hanaparitaka hazavana dia haverina ao anaty vakana ny hazavana, avelany hita taratra amin'ny lalana manondro ny mpamily.
Ny vakana fitaratra azo itarafana dia afaka manatsara ny fananana taratra Retro an'ny tsipika fanamarihana lalana. Mamily amin'ny alina, ny jiro dia mamirapiratra eny amin'ny làlana manisy marika amin'ny vakana fitaratra, ny hazavan'ny jiro dia hita taratra ihany koa. ka ny mpamily dia afaka mahita tsara ny lalana mialoha, ary mitondra soa aman-tsara amin'ny alina.
Vakana vita amin'ny vera vita amin'ny vera
Ny coated dia azo atao amin'ny 50um-1180um, mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Noho ny fisian'ny vakana fitaratra eo amboniny izay taratry ny jiron'ny fiara, môtô ary bisikileta, vakana fitaratra marika amoron-dalana no ampiasaina hitarika ny mpampiasa arabe ao anaty haizina. Rahoviana ......
Vakana fitaratra 1.7 ho an'ny fanamarihana ny lalana
Ny vakana fitaratra fitaratra 1.7nd dia afaka manatsara be ny fananana taratra Retro an'ny tsipika fanamarihana arabe. Mamily amin'ny alina, ny jiro dia mamirapiratra eny amin'ny làlana manisy marika amin'ny vakana fitaratra, ny hazavan'ny jiro dia hita taratra ihany koa. ka ny mpamily dia afaka mahita tsara ny lalana mialoha, ary mitondra soa aman-tsara amin'ny alina.